Guddoomiyaha baarlamaanka Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo ku biiray eedaynta dowladda faderaalka ee doorashada Baydhabo – Radio Daljir
Guddoomiyaha baarlamaanka Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo ku biiray eedaynta dowladda faderaalka ee doorashada Baydhabo
Diseenbar 6, 2018 4:16 g 0
Guddoomiyaha baarlamaanka Faderaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa ka qaybgalay kulan xildhibaanada iyo wasiirada kasoo jeeda Koonfur Galbeed ay ku yeesheen magaalada Muqdisho.
Kulanka ayaa waxaa kasoo muuqday guddoomiyeyaashii hore baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari iyo Aadan Madoobe.
Kulanka oo albaabada u xirnaa ayaa la sheegay in looga arrinsaday doorashada Koonfur Galbeed, waxaana masuuliyiinta ay ka horyimaadeen talaabadii ay dowladda faderaalka ay ugu dirtay Baydhabo ciidamo.
Sidoo kalle waxaa ay sheegeen in loo madaxbanaaneeyo shacabka Koonfur Galbeed aayahooda, lana joojiyo in musharixiinta qaarkood la faquuqo.
Muddooyinkii u dambeeyey waxaa jiray khilaaf madaxwaynaha , guddoomiyaha baarlamaanka iyo raysal wasaaraha taasi oo salka ku haysay khilaafka doorashada Koonfur Galbeed oo ay dowladda ay doonayso inay ka joojiso musharax Mukhtaar Roobow inuu ka qaybgalo.
Taliyihii Ciidamada Xoogga Militariga ee 12ka April iyo Sarkaal kalle oo lagu dilay Muqdisho
Maxaabis masruufa qoysaskooda iyago Xabsiga kujirra (dhegayso/daawo)